မဟာမှာ ဘာတွေရှိလဲ . . ?
FTA အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းသစ် တွင် ရွှေမြန်မာတို့ နှစ်ချိုက်သော အမျိုးအစားအလိုက် ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို ငွေကုန်ကြေးကျမှုမရှိပဲ ပျော်ပျော်ကြီးကြည့်နိုင်တဲ့ မဟာ တီဗွီချန်နယ်
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဇာတ်ကားကောင်းများကို အခမဲ့သော်၄င်း အခပေးဖြင့်သော်၄င်း မိမိ၏အားလပ်ချိန်အတွင်းကြည့်ရှု အပန်းပြေစေရန် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်သည်။
Facebook နှင့် YouTube ချန်နယ်ပေါ်တို့တွင်လဲ ရွှေမြန်မာတို့ အတွက် အဆင်ပြေကြည့်ရှုနိုင်ရန် Live Streaming များနှင့် ဇာတ်ကားသစ်များစွာတို့အား ပြသပေးလျက်ရှိသည်။
အပလီကေးရှင်းရဲ့ သူမတူ ထူးခြားတဲ့ အားသာချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ တရားဝင်ပြသခွင့် ရရှိထားသော ရုပ်ရှင် နှင့် ဗီဒီယိုအမျိုးအစားများအားကိုသာ တင်ဆက်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဇာတ်ကားထုတ်လုပ်ရေးများမှလည်း ပြသခွင့်ရရှိထားသော ဇာတ်ကားအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
မည်သည့် ဇာတ်ကားများမဆို ကြည့်ရှုသူတို့စိတ်ကြေနပ်မှုရှိစေရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ကြည့်ရှုမှုတွင် ဒေတာ ကောက်ခံမှုလျော့နည်းပါးစေခြင်း၊နှင့် ရုပ်သံကြည်လင်မှုအတိုင်းအတာ ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ အဓိကဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း။
မဟာရဲ့ ချစ်ပရိသတ်များလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုအောင်ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဇာတ်ကားအများဆုံး လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာလဲ ထည့်သွင်းပြသပေးနိုင်ခြင်း၊ မည်သည့်နေရာမှ မပြရသေးသော ဇာတ်ကားသစ်များစွာတင်ဆက်နိုင်ခြင်း။
လစဉ်ကြေးဖြင့် မကြည့်ချင်ကြည့်ချင် အခကြေးငွေပေးထားစရာမလိုပဲ ကြိုက်မှကြည့်၊ ကြည့်မှပေး ပုံစံဖြင့်တင်ဆက်ထားသည့်အတွက် အပိုငွေ မလိုအပ်ပဲငွေမကုန်ခြင်း။ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း နှင့် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ထားကာ ကြည့်နိုင်ခြင်း။
မြန်မာမှာ မြန်မာဇာတ်ကားတွေ နဲ့ ပတ်သက်လာရင် "မဟာ" ပဲရှိတယ်
မိမိရဲ့ အားလပ်ချိန်လေးကလည်း များများမရှိ၊ ရုပ်ရှင်င်ရုံ ဗီဒီယိုကိုလည်း အလှမ်းဝေးလို့မသွားနိုင်၊ အခွေအဌားဆိုင်မှာရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတွေလည်း ကြည့်ပြီးတာ ကုန်နေပြီ ဆိုရင် "မဟာ" က မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ အပလီကေးရှင်း ရှိပါတယ်။ မဟာရဲ့ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မဟာမိုဘိုင်းကို မိမိရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာသာထည့်သွင်းထားရင် မြန်မာဇာတ်ကားချစ်သူတွေအတွက် ဘယ်ဆီကိုရောက်ရောက် ဘယ်နေရာကဘဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူနဲ့ မြန်မာဇာတ်တွေ တဝကြီးကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့ ..
ရုပ်သံ၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ တစ်နေရာတည်းတွင် မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း ဇာတ်ကားကောင်း ဇာတ်ကားသစ်များစွာကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်တာကတော့ မဟာ က ပရိသတ်တွေအပေါ်ပိုထားတဲ့ စေတနာတွေပေါ့ . .